networking ဖြစ်ရပ်များ | USAHello အလုပ်နှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအရင်းအမြစ်များကို | USAHello
Networking ဖြစ်ရပ်များပရော်ဖက်ရှင်နယ်လူများစုဝေးနေကြသည်. သင်အလုပ်တစ်ခုကိုကူညီရှာဖွေနိုင်သူဖြစ်ရပ်များ networking မှာလူတွေတွေ့လိမ့်မည်. ဘယ်မှာဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာဖြစ်ရပ်များနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်လုပ်ဖို့ကိုရှာဖွေလေ့လာပါ.
Networking ဖြစ်ရပ်များအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကြံဉာဏ်ကိုမျှဝေအလုပ်အကိုင်များနှင့်လူများအဘို့အရှာနေကြသူလူများအတွက်လူမှုရေးဖြစ်ရပ်များများမှာ. အဆိုပါဖြစ်ရပ်များများမှာဘယ်မှာသင်ပြောပြကြောင်းဝဘ်ဆိုဒ်များရှိပါတယ်. သငျသညျဆိုသညျကားအဘယ်သို့ကျင့်သုံးလျှင်သင်လျော့နည်းအာရုံကြောခံစားရပါလိမ့်မယ်, အဘယ်အရာကိုသင်နှင့်အတူယူဆောင်လာရန်, သငျသှားမတိုင်မီလူတွေကိုပြောပြရန်မည်သို့မည်ပုံ. သင်တို့သည်လည်းအွန်လိုင်းနှင့်ဖုန်းဖြင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်.
Networking ဖြစ်ရပ်များမိန့်ခွန်းပါဝင်နိုင်ပါသည်, ညစာစားပွဲ, သို့မဟုတ် "ပျော်ရွှင်နာရီ။ " မင်္ဂလာနာရီလူတွေအချိုရည်နှင့်စားသောက်ကုန်ကျော်စကားပြောရန်ရှိရာစုဝေးနေကြသည်. အများစုမှာဖြစ်ရပ်များမွန်းလွဲပိုင်းတွင်သို့မဟုတ်ညဦးယံ၌များမှာ.
Networking ဖြစ်ရပ်များပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့်ကိုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အများသောအားဖြင့်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အားလုံးအဆင့်ဆင့်အဘို့အအချို့သောဖြစ်ရပ်များရှိပါတယ်. ဥပမာ, အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဝိုင်းသင်သည်များစွာသောတဦးတည်းစက်မှုလုပ်ငန်းကနေအလုပ်ရှင်သို့မဟုတ်တဦးတည်း၏တည်နေရာကိုရှာဖွေစေခြင်းငှါအဘယ်အရပ်ဖြစ်ရပ်များများမှာ. သူတို့ဟာန်ထမ်းကိုရှာဖွေတယောက်အာကာသ၌စည်းဝေးကြ.
တစ်ဦး networking ဝဘ်ဆိုဒ်ကိုသုံးပါ - ဝက်ဘ်ဆိုက်များအပါအဝင် eventbrite.com နှင့် meetup.com. သင်သည်သင်၏လိပ်စာအတွင်းသို့ဝင်နှင့်သင့်ဧရိယာ၌အခမဲ့စျေးပေါ options များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်.
ဒေသအလိုက်ဖြစ်ရပ်များ networking ကိုရှာပါ - နှင့်ou အသိုင်းအဝိုင်းစင်တာများမှာဖြစ်ရပ်များ networking များအတွက်ကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်, အသင်းတော်များ, ဗလီ, နှင့်တရားစရပ်တို့၌. ဝတ်ပြုကိုးကွယ်နေတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းစင်တာသို့မဟုတ်နေရာရှာတွေ့, သင်၌အသိုင်းအဝိုင်းအလယ်ဗဟို "ကိုအွန်လိုင်းရှာဖွေနိုင်ပါတယ် [သင့်ရဲ့မြို့သို့မဟုတ်ရပ်ကွက်အတွင်း]."ဒါမှမဟုတ်သင်လုပ်နိုင်သည် သင့်ဒေသခံစာကြည့်တိုက်ကိုရှာဖွေ သူတို့ဖြစ်ရပ်များရှိပါကမေးဖို့.
သငျသညျရှေ့တျော၌ပြုသောအမှုကြပြီမဟုတ်ပါလျှင်ကွန်ယက်အဖွဲ့သငျသညျသဘာဝမခံစားရစေခြင်းငှါ. သူစိမ်းအစည်းအဝေးပထမဦးဆုံးမှာမသက်မသာခံစားရနိုင်ပါတယ်. အရာအားလုံးအလေ့အကျင့်များနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူရရှိသွားတဲ့ဆိုတာသတိရပါ.
တစ်ခုကဓာတ်လှေကားအစေးတစ်ကွန်ရက် event မှာပြောသင်ကိုယ်တိုင်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာတစ်ဦးကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် ဓာတ်လှေကားအစေး ဒါကြောင့်အတိုချုပ်သောကွောငျ့ - တစ်ဓာတ်လှေကားစီးစဉ်သငျသညျကအားလုံးကိုပြောနိုင်ပါလိမ့်သင့်တယ်! အဆိုပါအစေးသင်တို့၏နာမပါဝင်သည်, သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်, နှင့်သင်တို့အဘို့အဘယ်အရာကိုအလုပ်အကိုင်များရှာဖွေနေပါသည်. သင်ကလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ကိုမှတ်မိဒါကြောင့်သင့်အစေးလေ့ကျင့်. တစ်ဦးကကောင်းကောင်းပြန်ကြားစေးတို့သည်ကြီးစွာသောပထမဦးဆုံးအစှဲပေးသည်. ဒီနေရာတွင်ဥပမာများမှာ:
"ငါ့နာမကို Juana ဖြစ်ပါသည်. ငါထိန်းဖြစ်ကြောင်းကိုနဲ့ကျွန်မအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်ပါပြီ5မက္ကစီကိုအတွက်မိသားစုများ. ငါမဆိုအသက်သားသမီးများ၏စောင့်ရှောက်မှုယူပြီးအပြည့်အဝသို့မဟုတ်အခြိနျပိုငျးအလုပျကိုရှာနေပါတယ်။ "
"ငါ့နာမကို Samir ဖြစ်ပါသည်. ငါနှင့်အတူစာရင်းကိုင်ဖြစ်ကြောင်းကို4အီရန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီများအတွက်အတွေ့အကြုံအနှစ်. ငါအငယ်တန်းစာရင်းကိုင်အနေအထားကိုရှာနေပါတယ်။”
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကတ်များသင်တို့၏နာမနှင့်အတူအသေးကတ်များများမှာ, ဖုန်းနံပါတ်, အီးမေးလ်နှင့်အလုပ်အကိုင်သို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်. အဆိုပါအလုပ်သငျသညျယခုသို့မဟုတ်သင်တို့အဘို့လေ့ကျင့်သင်ကြားကြပါသည်တဦးတည်းရှိတဦးတည်းရှိနိုင်ပါသည်. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကတ်များဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ဖြစ်ရပ်များမှာအလွန်အသုံးဝင်သောများမှာ. သူတို့သည်သင့်ကိုလျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖလှယ်ဖို့ခွင့်ပြု. သငျသညျဏလုပ်နိုင်ရုံးထောက်ပံ့ရေးစတိုးဆိုင်များသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းမှာ rder စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကတ်များ.
ပြင်ဆင်! သငျသညျသငျနှငျ့အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကတ်များလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ရှိသည်သင့်. သငျသညျမိတ်ဆွေတစ်ဦးမှတဆင့်ဒါမှမဟုတ်စူပါမားကက်မှာသင့်ကိုကူညီနိုင်သူတစ်စုံတစ်ဦးကဖြည့်ဆည်းခြင်းငှါ.
အဆိုပါကွန်ရက် event မှာ
သင်အောင်မြင်ဖို့ကူညီပေးဖို့လုပျနိုငျသောအရာတို့ကိုဖြစ်ရပ်များ networking မှာရှိပါတယ်. မပြုအမှုအရာလည်းရှိပါတယ်!
ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ - လည်းများစွာသောလူဖြည့်ဆည်းဖို့ကြိုးစားပါဘူး. နည်းပါးလာကလူစကားပြောနှင့်ကြာရှည်မည်ကိုဆက်သွယ်မှုလုပ်ပိုကောင်းဒါဟာဖြစ်ပါသည်.
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကဒ်ကိုတောင်း - လည်းကလူ, သင်၏ကဒ်ပေးရသေချာအောင်.
မှတ်စုကိုယူ - သင်ရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်များကိုမှတ်မိချင်ဘာမှရေးရန်.
နောက်ဆက်တွဲ - ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောနှင့်ထိတွေ့နေဖို့ LinkedIn တို့မက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်အီးမေးလ်များကိုပေးပို့.
ချက်ချင်းမျက်နှာသာတောင်းမနေပါနဲ့ - သငျသညျမှစကားပြောနေကြသည်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမျက်နှာသာကမ်းလှမ်းသည်အထိစောင့်ဆိုင်း, ဒါမှမဟုတ်အဖြစ်အပျက်ပြီးနောက်သူတို့ကိုစကားပြော.
အလွန်အကျွံသင်ကိုယ်တိုင်အကြောင်းပြောဆိုမနေပါနဲ့ - သငျသညျမှစကားပြောနေကြသည်လူတစ်ဦးမျှမနှောက်ယှက်. သူတို့ကိုမေးခွန်းများကိုမေးပါနှင့်သူတို့ပြုတဲ့အခါမှသာကိုတုံ့ပြန်.
နိုင်ငံရေးသို့မဟုတ်ဘာသာရေးအကြောင်းပြောဆိုမနေပါနဲ့ - အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများနှင့်အလုပ်အကိုင်များအကြောင်းပြောနေတာအာရုံစိုက်
သငျသညျလူတစ်ဦးအတွက် networking ဖြစ်ရပ်များကိုသှားဖို့အချိန်ရှိသည်မပြုစေခြင်းငှါ. သင့်ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကွန်ယက်ကိုချဲ့ထွင်ဖို့တခြားနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်. သငျသညျတခုအွန်လိုင်းကွန်ရက်ဆက်သွယ်နိုင်, သငျတို့သအွန်လိုင်းမှသို့မဟုတ်ဖုန်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာအင်တာဗျူးတက်သည်မနာသီချင်းဆိုနိုင်ပါတယ်.
LinkedIn တို့သင်လုပ်သားအင်အားအတွက်အခြားလူကိုချိတ်ဆက်နိုင်မည့် website တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာ Facebook ကကဲ့သို့ဖြစ်၏, ဒါပေမယ့်အလုပ်အတွက်. သငျသညျအကွောငျးကိုပြောသွားတဲ့ပရိုဖိုင်းကိုဖန်တီး သင့်ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွေ့အကြုံကို. သငျသညျကလူစကားပြောနိုင်ပါတယ်, အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်ကိုကြည့်, နှင့်ဆောင်းပါးများကို post ဖတ်. ဒါဟာအမေရိကန်အတွက်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်ကမ္ဘာတဝှမ်းကပိုကလူကအသုံးပြုနေသည်. ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ် တစ်ဦး LinkedIn တို့ပရိုဖိုင်အတွက်မှတ်ပုံတင်ရန်.
အလွတ်သဘောအင်တာဗျူးသင်ပြုချင်နေတဲ့အလုပ်အတွက်သူသည်တစ်စုံတစ်ဦးနဲ့စကားဖြစ်ပါသည်. ဤစကားဝိုင်းလူတစ်ဦးအတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်, ဖုန်းပြောနေ, ဒါမှမဟုတ်ကွန်ပျူတာကိုဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအပေါ်. အဆိုပါအင်တာဗျူးနှင့်ပတ်သက်ပြီးကြာရှည်သင့်တယ် 30 မိနစ်များ. အဆိုပါရည်မှန်းချက်ဟာသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံများအကြောင်းကိုနားမထောင်ခြင်းနှင့်အကြံဉာဏ်ကိုရရန်ဖြစ်ပါသည်. သူတို့တစ်တွေလက်မှတ်မလိုအပ်ခဲ့ဘူး? အဘယ်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အခြားသူများထက်ပိုကောင်းကြည့်ရှုခဲ့ကြ?
သငျသညျ LinkedIn တို့မှတဆင့်အလွတ်သဘောအင်တာဗျူးအဘို့လူတွေကိုမေးနိုငျ. သင်တို့သည်လည်းမိတ်ဆွေများနှင့်အသိအကျွမ်းတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်. အဆိုပါ Read မေးရန်ထိပ်ဆုံးရှစ်မေးခွန်းများကို အလွတ်သဘောအင်တာဗျူးအတွက်. အမြဲတမ်းသင်သည်သူတို့၏အချိန်စကားပြောသည့်လူတစ်ဦးကျေးဇူးတင်ဖို့သေချာပါစေ.